7 Qodob oo ay Gabadh kastaa kugu Jeclaan karto ” RAGA. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada jaceyl 7 Qodob oo ay Gabadh kastaa kugu Jeclaan karto ” RAGA.
7 Qodob oo ay Gabadh kastaa kugu Jeclaan karto ” RAGA.
Bulsha:- Hees Soomaali ah ayaa ereyadeeda waxa ka mid ah “Hadii Aan Jacayl Jirin..Jaar Lama Ahaadeen.. Hadii Aan Jacayl Jirin Aduunyadu Ma Joogteen”, iyada oo ka hadlaysa jacaylka iyo sida aanay noloshu la’aantii u sii socon karin, hadaba iyada oo jacaylku badiyaaba uu noocyo badan yahay ayaa hadana waxa marka ereyga Jacayl la arko loola booda kalgacal ka badiyaaba dhexmara labada qof ee gayaanka ah.
Halkan waxa aad ka daalacan doontaa 7 arimood oo haduu wiilku sameeyo sabab u noqon doonta gabadh alliyaalo gabadha uu doono ay jeclaan doonto, 7 dan tallabo in badan ayaa hore loo baroomeeyay ama loo tijaabiyay waana sidan:
1. Waxaad isku daydaa in aad markasta indhaha gabadha aad eegtid: Awooda u ninku u leeyahay in uu eego indhaha gabadha waxa macnaheegu uu yahay in uu yahay qof isku kalsoon, halka ninka indhaha hoos u dhigaana uu yahay qof kalsoonida naftiisa uu ku qabaa ay aad u hoosayso.
2. Waa inaad garataa waxa aad ka doonayso, si markiiba loo fahmo fariintaada.
3. Kalsoonida aad naftaada ku qabto u muuji: diraasad ay jaamacada Briston samaysay ayaa waxay ardayda waydiisay qaababka ay dadka markay la kulmaan u qanciyaan, waxa ay sheegeen in qofka xamaasada saaidka ah badiyaaba laga dareemo uu fashilan yahay.
4. Fiiri amba eeg indhaha gabadha aad la hadlaysid: Awooda u ninku u leeyahay in uu eego indhaha gabadha waxa macnaheegu uu yahay in uu yahay qof isku kalsoon, halka ninka indhaha hoos u dhigaana uu yahay qof kalsoonida naftiisa uu ku qabaa ay aad u hoosayso.
5. Dhoola cadayn:Dhoola cadayntu waxay binu aadamka gaar ahaan dumarka ku abuurtaa kalgacal iyo kalsooni ay ku kalsoonaadan qofka dhoola cadaynaya, balse hadii aad dhoolacadayso waqti aan loo baahnayn waxa ay ka turjumaysaa awood darro iyo kalsooni darro.
6. Xidho maryo qurux badan: quruxda maryuhu waxa weeye inay noqodaan qaar indhaha soo jiidanaya, kana turjumaya xeerka bulsho ee kolba aad ku dhex nooshay waxaanay badiyaaba wax ka tilmaamta shakhsiyada qofka.
7. Iska Ilaali agagaarka saaxiibka: agagaarka saaxiibka (Freind Zone) waxa weeye saska ugu wayn ee ay ragu ka qabaan dhinaca dumarka, waxa badiyaaba agagaarka inaad gasho sababa arimo dhawr ah ee ay kamid yihiin “Labada sunniye oo kor loo qaado mudo hal ilbidhiqsi ahi waxay calaamad u tahay saaxiibtinimo.